सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबिरुद्ध महाभियोग लगाउदै ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबिरुद्ध महाभियोग लगाउदै !
सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउनका लागि यही मंसीर २८ गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको बताएका छन।
उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने जानकारी समेत दिए। प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको सांसद बिडारीको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने तर्क गरेका छन। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गर्दै आए पनि राणाले अस्वीकार गर्दै आएका छन।
कमल थापा र रेखा थापाबिच फेसबुक युद्ध !
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन चलिरहेकै बेला अध्यक्ष कमल थापा र रेखा थापाबिच फेसबुक युद्ध सुरु भएको छ । उनीहरुले एक अर्काको अन्तर्वार्ता भिडियोलाई सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा सेयर पोष्ठ गर्दै फेसबुक युद्ध सुरु गरेका छन ।
अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन चलिरहेको छ । कमल थापा राप्रपाको पुनः अध्यक्षमा दोहोरिन अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराईसकेका छन । उनको प्रतिशपर्धी राजेन्द्र राजेन्द्र लिङदेन हुन । त्यस्तै रेखा थापले पनि अर्का पार्टी अध्यक्ष उम्मेदवारी
राजेन्द्र लिङदेन प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिइसकेकी छिन । रेखा थापाको प्रतिशपर्धी कमल थापा प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिइसकेकी पूर्वराज्यमन्त्री कुन्ती शाही छिन ।
रेखा थापाले करिब एक वर्ष अघि एक अन्तर्वार्तामा आफु राजतन्त्र नभएर गणतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएकी थिइन । तर उनी आफु रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा भनेकै गणतन्त्रलाई उल्टाएर राजतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको छ । सोही अन्तर्वार्तामा आफु गणतन्त्रको
पक्षमा रहेका अभिव्यक्तिलाई दैनिक न्यूज नेपालले समाचार बनाएको थियो । त्यो अहिले सामाजिक संञ्जालमा भाइरल भइरहको छ ।
राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेकै पार्टीको एक जिम्मेवार नेत्री र अहिलेको महामन्त्रीको उम्मेदवारीले नै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना र टिप्पणी हुनु स्वाभाबिक नै थियो । तर त्यो बेला रेखा थापाले आफु गणतन्त्रको पक्षमा रहेको अभिव्यक्तिको
कुनै चर्चा वा खरो टिप्पणी समेत भएन । तर त्यो अभिव्यक्ति अहिले ठ्याकै महाधिवेशनमा खुबै चर्चा र बिभिन्न खालको टिप्पणी भइरहेको छ ।
पहिले कमल थापाले रेखा थापाले म गणतन्त्रको पक्षमा छु, भन्ने अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई ५२ सेकेन्डको अशं फेसबुकमा पोष्ट गर्दै हाहाहा!नो कमेन्ट लेखेका छन । त्यसलाई ३ हजारले लाईक, ७ सय कमेन्ट र करिब २ सयले सेयर गरेका छन । त्यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।